Umvundla wase koloni - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Umvundla wase koloni, okanye iBrown Hare [Lepus capensis] Kukho iintlobo ezilishumi elinesibini zeCape Hare ezifumaneka kulo lonke elase-Afrika.
Ibhinqa leCape Hare lincinci ngaphezu kwendoda. Ubuninzi lwawo buhluka ukusuka kuma-1.5 ukuya ku-2.5 kg. Umzimba u brown nangwevu, Iindlebe ezinde kunye nomsila omnyama namhlophe ubonakala kakhulu xa zihamba. I-Cape Hare ihluke kwi-Scrub Hare ngobuncinane bayo kunye nokungabikho mhlophe phantsi kweengxenye.
Ngokuxhomekeke ekufumanekeni kwengca okanye izityalo zingatya okanye ziphande. Ziphinde zenze iipeliti ze-faecal ezithambileyo ngqo kwi-ngemva ngexesha lokuphumla kwazo emini, kwaye zidibanise iipelisi ezinzima ngexesha lokutya kokuhlwa.
I-Cape Hare ingumzalisi ongeyonyaka, ozalelwa kuwo wonke unyaka, nangona ukuzalwa kubonakala kuphakame ngexesha leemvula. Izala enye ukuya kweyesithathu emva kwexesha lokunyuka kweentsuku eziyi-42. Incinci ivuliwe ngokupheleleyo kwaye ilayishe igramu eziyi-100 ekuzalweni. Amehlo avulekile ekuzalweni kwaye ezisandu 'ukuzalwa zinakho ukuva kunye nokujikeleza, ngaphakathi kweeyure eziyi-48 zizelwe. Iingxube zanyelwa ngabasetyhini imizuzu elishumi kuphela ubusuku bonke. Ulungelelwano luqhutyelwa kwithuba leeveki ezintathu kuphela. Akukho zityalo ezibonelelwa ngamatta.
I-Cape Hare iyodwa, kodwa i-oestrus amabhinqa anokulandelwa ngamadoda ambalwa ngexesha elifutshane. Indawo ekhethiweyo yindawo evulekileyo. Kwenzeka kwinqanaba elifutshane, elivulekileyo lendawo yokuhambisa.
I-Cape Hare ixhaphakile kwaye ininzi kwimimandla eyomileyo yaseMzantsi Afrika, iphinda ivele eBotswana kunye nakwizithili eziphambili zaseNamibia.